Degdeg:- Ciidanka Turkiga oo la wareegay inta badan magaaladii ugu muhimsanayd Kurdida ee Ras Al-Ain. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Degdeg:- Ciidanka Turkiga oo la wareegay inta badan magaaladii ugu muhimsanayd Kurdida ee Ras Al-Ain.
Ciidamada Turkiga iyo xulufadooda Syria ayaa qabsaday dhul badan oo ka mid ah magaalada muhiimka ah ee Ras al-Ain, halkaasi oo dagaal-yahannada Kurdiyiinta ay iska cabin xoogan ka sameynayeen, waxaa sidaas sheegtay hay’ad la socota dagaallada Syria.
“Duqeyn xooggan ayaa ku socotay Ras al-Ain saddexdii maalmood ee tagay,” waxaa sidaas yiri Rami Abdel Rahman oo ah madaxa hay’adda fadhigeedu yahay Britain ee la socoshada xuquuqda aadanaha Syria.
Ciidamada Turkiga iyo dagaal-yahannada ay taageerayaan ee Carabta iyo Turkmen-ka Syria ayaa “la wareegay kala bar magaalada Ras al-Ain, sida uu sheegay Rami.
Ciidamada Kuridiyiinta ay hogaamiyaan ee koxoda SDF, oo ay ka awood badiyeen ciidamada Turkiga ee dhulka iyo cirka ayaa lumiyey dhul ballaaran oo ku teedsan xuduudda Turkiga, tan iyo markii hawl-galka uu billowday 9-kii October.
Hase yeeshee, waxay daafac xooggan ka galeen magaalada Ras al-Ain, ayaga oo dhistay aagag dhulka hoostiisa ah oo adag, taasi oo awood u siisay in muddo toddobaad ah ay iska caabiyaan ciidamada Turkiga hoggaaminayo.
Si kastaba, iska caabintaas ayaa qarka u saaran inay soo geba gebowdo, ayada oo maanta ay ciidamada Turkiga gacanta ku hayaan bar ka mid ah magaalada.
Previous articleDAAWO:- Erdoğan oo bahdil ku sameeyay Trump “Warqadii qashinka ayuu ku daray isla maalintaasna duulaanka ayuu bilaabay”.
Next articleDAAWO:- Gudoomiye degmo oo la xaqiijiyay inuu Alshabaab katirsan yahay kana qayb qaatay dilal badan oo dhacay.